« Fa ny hosoka no lehibe indrindra… » -
AccueilTresaka« Fa ny hosoka no lehibe indrindra… »
28/12/2018 admintriatra Tresaka 0
Tokony hovan’i Andry Rajoelina ilay hoe “Fa ny Fitiavana no lehibe indrindra…”, nentiny namitaham-bahoaka teto nanomboka tamin’ny Tetezamita. Tsy izany velively mantsy no zava-misy ankehitriny “fa ny hosoka no lehibe indrindra…”.
Milamin-tsaina sy mahita fahasambarana amin’izany hoe “lany tamin’ny hosoka sy hala-bato” izany ve i Andry Rajoelina sy ny forongony? Dia ho vitan’i Andry Rajoelina ve ny hanao fianianana amin’ny Baiboly eny Mahamasina amin’izao hosoka sy hala-bato izao? “Fa ny hosoka no lehibe indrindra…”, io no tokony hotenenin’i Andry Rajoelina mandritra izay kabary hataony manomboka izao.
Tsy ampy an’i Andry Rajoelina ihany ve ny fandrabirabiana ataon’ny olona aminy hoe “putschiste”, mpanongam-panjakana no mbola hampiana indray hoe “mpangala-bato” sy “mpanao hosoka” e? Miala amin’ny fanonganam-panjakana ve dia hiditra amin’ny fangalaram-bato sy fampiasa hosoka indray koa hahazoana fanjakana e!
Amin’ny fomba ahoana no hametrahana ny fitantanana ny firenena eo am-pelatanan’olona mpanao hosoka sy mpangalatra, izay midika ho tsy fahatahorana an’Andriamanitra, ary mazava ho azy fa tsy maintsy mampiasa hery sy famoretana mandritra ny fotoana maha eo amin’ny fitondrana azy. Tsy azo ekena velively izany ary mampametra-panontaniana hoe: “voaozona tanteraka ve ity tanindrazana iombonana ity?”.
Aiza ny Fiangonana eo anatrehan’izao zava-mitranga izao? Manaiky hosoka sy halatra ve ny Fiangonana koa inona intsony izany no hampianarana Sekoly Alahady sy Katekomena? Fanekena izao hosoka sy hala-bato izao mantsy no handikana ny fahanginan’ny Fiangonana, izany hoe, firaisana tsikombakomba amin’ny mpanao ratsy. Inona moa izany fa dia mbola manamafy ilay teny fototra manao hoe “fa ny hosoka no lehibe indrindra…!”.